Shiinaha Customized boorsada boorsada ragga Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada kumbuyuutarka > Boorsada kumbuyuutarka ragga
1. Boorsada kumbuyuutarka ragga product introduction:
(1) Boorsadan kumbuyuutarka ahi waxay ka samaysan tahay dharka 900D ee Oxford oo aan biyuhu ka madhnayn. Maaddadani waxay leedahay iftiin dhalaalaya, waxayna sidoo kale leedahay xoog isku-leexin lagu kalsoonaan karo. Cufnaanta dharka ee aadka u wanaagsan iyo dahaadhka biyaha ayaa ka dhigaya mid aan biyuhu lahayn oo u adkeysanaya. Heerka Pull wuxuu leeyahay horumar tayo leh.
(2) 210D nylon oxford maro ayaa lagu isticmaalaa gudaha, teknolojiyadda jilicsan ee dharka iyo nuuradduna waxay ka dhigayaan maadadan mid aad u horumarsan Inta badan boorsooyinka horumarsan ayaa adeegsanaya qalabkan.
(3) Waxaan ugu talagalnay howlo balaadhinta boorsadan kumbuyuutarka ee ragga. Naqshaddani waa mid jilicsan oo habboon, taas oo si wax ku ool ah u kordhin karta awoodda boorsada waxayna u oggolaan kartaa macaamiisha inay rartaan waxyaabo badan. Awoodda isticmaalka maalin kasta waa 26L, ka dib ballaarinta, waa 39L.
(4) Si looga hortago kuwa wax jabsada inay xadaan lacagta kaararka aqoonsiga ama kaararka amaahda, waxaan si gaar ah u adeegsanaa waxyaabaha ilaaliya calaamadaha elektromagnetic-ka si aan ugu qaabeyno boorsada kaarka amaahda ee la soo xaday boorsada kumbuyuutarka ragga, si ay amaan ugu noqoto kaarka macaamiisha bacda ka ilaali inay gudaha ku jirto.
(5) Si aan ulashaqeyno kiiska gaariga, waxaan si gaar ah ugu talagalnay suunka hagaajinta boorsada ragga ee kombiyuutarka oo lagu hagaajin karo usha tararolka. Safarada shaqo ee masaafada dheer, uma baahnid inaad garbahaaga ku adkeysato, si toos ah ugu dheji sanduuqa taraleyda, adoo xoreynaya macaamiisha daalan.
(6) Waxaan u qorsheynay furitaanka 180 ° boorsadaan, si dadka isticmaala boorsadaan ay si fudud ugu helaan alaabada.
(7) Noocan boorsada kumbuyuutarka ee ragga ayaa qaadi kara laptop-yada illaa 17.3 inji.
(8) Miisaanka 1.2Kg wuxuu ka dhigayaa boorsada dhabarka mid aad u fudud. Waxaan iska dhigeynaa dhulka oo waxaan ka eegeynaa dhibaatada dhanka macaamiisha waxaanan soo jeedineynaa xalal.
(9) Boorsadan laptop-ka ee raggaani waxay si wax ku ool ah ula qabsan kartaa alaabada agabka laptop-ka, oo ay ka mid yihiin kiiboodhka, jiirka, xadhkaha korontada, iyo bac weyn oo lagu keydiyo gudaha, taas oo qaadi karta dharka, kabaha iyo waxyaabaha kale ee loo isticmaalo safarada ganacsiga. Waa boorso isku dheelitiran.
(10) Waxaan sidoo kale si taxaddar leh u qorsheysanay madax ka amraya taleefanka gacanta ee dibadda ah, si dadka isticmaala aysan ugu baahnayn inay gacanta ku hayaan awoodda mobilada iyo mobilada gacmahooda inta lagu jiro safarada ganacsiga, taasoo si wax ku ool ah u xallinaysa dhibaatada isticmaaleyaasha ku haysta alaabooyin badan hal gacan.
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) boorsooyinka kombiyuutarka ragga
900D dharka nylon-biyoodka Oxford
Dhererka 30cmX Width 24cmX Dhererka 48cm
Oo ay ku jiraan laptops iyo kiniiniyada cabirkoodu ka hooseeyo 17.3 inji
3. Astaamaha iyo codsiyada boorsooyinka kumbuyuutarka ragga
(1) Boorsadan kumbuyuutarka ahi waxay leedahay astaamo u gaar ah biyo-diidka, xoqida u adkaysata, yareynta culeyska, naxdin-qaadashada, adkaysiga u adkeysiga, nolosha muddada dheer, iyo shaqooyinka badan.
(2) Dharka mesh gadaal ayaa si wax ku ool ah uga caawin kara kala-baxa kuleylka dhabarka, inuu gadaal hawo yeesho oo qalajiyo, oo uu ilaaliyo caafimaadka isticmaalaha.
(3) Waxaad u isticmaali kartaa boorsadan kombiyuutarka ragga ah si aad si fudud ugu keydiso laptop-kaaga shaqada iyo qalabka agabka ah, sida kiiboodhka, jiirka, U diskiga, moobilka moobaylka, iwm. . Wuu qabsan karaa dharka, waxyaabaha musqusha, iwm ee uu adeegsadaha adeegsado safarada shaqo
(4) Ka samaysan alaabada ceeriin ee aan biyuhu xirin, alaabooyinka wanaagsan waa inay noqdaan kuwo aan laga sooci karin alaabta ceeriin oo tayo sare leh iyo farsamooyin tolidda wanaagsan.
(5) Waxaan ku qalabaynay boorsadan kombuyuutarka ragga kombuyutarka qayb ka mid ah gudaha, taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta kaarka bangiga ee isticmaalaha inay jabsadaan oo ilaaliyaan lacagaha isticmaalaha.
(6) Marka labaad, boorsadani waxay leedahay naqshad deeqsi iyo moodel leh, oo ku habboon dhammaan ragga qaangaarka ah.
(7) Boorsadan kumbuyuutarka ah ee ragga waxay ku qalabeysan tahay dalool dibadda laga soo buuxiyo, kaas oo ka qaadi kara taleefanka gacanta wakhti kasta iyo meel kasta oo socodka ah. Si kastaba ha noqotee, isticmaaluhu wuxuu u baahan yahay inuu dhigo korantada korontada moobiilka booska ku habboon boorsada. Isticmaalayaashu waxay dooran karaan inay iswaafajiyaan korontada iyaga laftooda. Haddii isticmaaluhu uusan bixin karin bangiga korontada keligiis, waxaan ku siin karnaa bangiga awoodda polymer.
5. Xirxirida iyo rarka boorsooyinka kumbiyuutarka ragga
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 48cm X 32cm X 12cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 50cm X 36m X 78cm.10PCS / kartoon. Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(5) Waxaan qaabeyn karnaa qaab wax ku ool ah oo wax ku ool ah, laakiin tani waxay hureysaa waxyaabo qaar waxayna sababi kartaa isbadal muuqaalka sheyga ah. Guud ahaan kuma talineyno macaamiisha inay adeegsadaan qaabkan.
(6) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonnaa xirmada boorsadan kumbuyuutarka ee ragga si waafaqsan shuruudahaaga.
Jawaab: Haa, waxaan nahay warshad soo saarta bacaha oo ku taal Shiinaha, warshaddeenuna waxay leedahay meel la isticmaali karo oo dhan 18,000 mitir murabac ah.
Jawaab: Haddii aad doorato badeecadayada saamiyada, wareegga gaarsiinta waa 3-5 maalmood oo shaqo. Haddii aad u baahan tahay adeegyo habaysan, meertada wax soo saarku waa 35-45 maalmood, iyadoo kuxiran heerka habraaca wax soo saarka alaabtaada.
Jawaab: Waxaan ku siin karnaa shaybaarro bilaash ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka bixiso khidmadda farriinta ee ka socota Shiinaha illaa waddankaaga.
Calaamadaha kulul: Boorsada kumbuyuutarka ragga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka